News Collection: शाहरुखले चलचित्रमा चुम्मन लिने ?
शाहरुखले चलचित्रमा चुम्मन लिने ?
बलिउडमा शाहरुख़ खान प्रेमप्रधान चलचित्रहरूका कारण बलिउडको शिखरमा पुगेका हुन, तर उनले हाल सम्म कुनै पनि चलचित्रमा चुम्मनको दृष्य दिएका छैनन्। तर शाहरूखले आफ्नो आगामी चलचित्र 'रा.१' मा करीना कपूरलार्इ चूम्मन दिने भएका छन्। खबरका अनुसार ठुलो बजेतको यस चलचित्रको एक प्रणय गानामा शाहरुखले करीनालार्इ ओठे चूम्मन दिने भएका छन्।
चलचित्रमा सलग्न मानिसहरूले यस कूराका बारेमा बर्णन गरेतापनि खुलेर यस बारेमा कसैले बोल्न सकेको छैन। खबरका अनुसार यस गानामा शाहरूख र करिनाको गरमा गरम चुम्मनको दृष्य छाँयाकण गरिसकेको छ। तर शाहरूखका करिबीहरूका अनुसार चलचित्रका लागि त्यस्तो कुनै दृष्यको छाँयाकंण गरिएको छैन। उनीहरूका अनुसार शाहरुखले चलचित्रमा चुम्मनको दृष्य नदिने सकंल्प लिएकोमा त्यसलार्इ कुनै हालतमा टोड्ने छैनन्।